बिश्वभर नयाँ तरंग ! किम जोङ उन शक्तिशाली शासक बन्नुको रहस्य बाहिरियो — SuchanaKendra.Com
बिश्वभर नयाँ तरंग ! किम जोङ उन शक्तिशाली शासक बन्नुको रहस्य बाहिरियो
काठमाडौं । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनको स्वास्थ्यसम्बन्धी गम्भीर सूचनाहरु सार्वजनिक भएको करिब तीन हप्तापछि शनिबार उनको तस्बिर सार्वजनिक भयो । शनिबार उत्तर कोरियाली सञ्चारमाध्यमहरुले उनले कुनै एक सार्वजनिक समारोहमा सहभागी भएको तस्बिर सार्वजनिक गरे । यसअघि उनी गम्भीर रुपमा विरामी परेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए भने केहीले त उनको मृत्यु भएको समेत समाचार दिएका थिए । अन कसरी ‘जनरल किम’ बने भन्ने वृत्तान्त सन् २०१६ द वाशिङ्टन पोस्टमा प्रकाशित किमकी सानीमाको अन्तर्वार्तामा उल्लिखित छ। झन्डै दुई दशकअघि गो यङ-सुक र उनका श्रीमान् पाश्चात्य देशको शरणमा पुगेका थिए । उनीहरू अहिले न्यू यो र्कबाहिर कतै गुप्तवासमा छन्।
उक्त जन्मोत्सवदेखि नै किम जङ-अनलाई किम जङ-इलको उत्तराधिकारीका रूपमा छानिएको आफूलाई लागेको उनले अन्तर्वार्तामा बताएकी छन्। “सबैबाट त्यस्तो व्यवहार पाएका हुनाले उनलाई सामान्य मानिसजसरी हुर्कन असम्भव थियो,” गोले बताइन्। गोका अनुसार किशोरावस्थामा किम रिसाहा र अहङ्कारी थिए। “उनी समस्या त सिर्जना गरिहाल्दैनथे, तर रिसाइहाल्ने स्वभाव भएका र असहिष्णु थिए। एकचोटि पढाइमा ध्यान नदिएको र खालि खेलिराखेको भनेर उनकी आमाले गाली गर्दा किमले प्रत्युत्तर त दिएनन्, तर भोकै बसिदिए।” उनी यस्तै अरू तरिकाले प्रतिवाद गरिदिन्थे।
किम जङ-अनले पछि सत्ता सम्हाल्ने पूर्वानुमान सबैभन्दा पहिले केन्जी फुजिमो तो भनेर चिनिने एक जना जापानी सुशी शेफले गरेका हुन्। सन् १९९० को दशकमा फुजिमो तो किमका विश्वासपात्रहरूको समूहमा सदस्यजस्तै बन्न पुगेका थिए।उनी किम जङ-इलका लागि जापानी परिकार बनाउँथे। फुजिमोतोका अनुसार बालक किम जङ-अन उनीसँग खेल्ने गर्थे। सन् २००१ मा फुजिमो तो स्वदेश फर्किए र एउटा पुस्तक लेखे। त्यसमा उनले किम जङ-अन र उनका दाजु किम जङ-चलसँगको आफ्नो पहिलो भेटबारे वर्णन गरेका छन्।
”पहिलो चोटि मैले यी दुई तन्नेरी राजकुमारहरूलाई भेट्दा उनीहरू दुवै जना सैन्य पोसाकमा थिए। उनीहरूले पालैपालो सबै कर्मचारीसँग हात मिलाए। मसँग हात मिलाउने पालो आउँदा राजकुमार किम जङ-अनले मलाई एकटकले हेरे। त्यो ‘तिमीजस्ता जापानीलाई हामी घृणा गर्छौँ’ भन्न खोजिएजस्तो थियो। सातवर्षे बालकको त्यो बिझाउने हेराइ म कहिल्यै बिर्सिन्नँ।”
सन् २००३ मा प्रकाशित आफ्नो दोस्रो पुस्तकमा फुजिमोतोले लेखेका छन्: “किम जङ-चललाई सबैभन्दा सम्भावित उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिन्छ। तर त्यसबारे मलाई शङ्का लाग्छ। किम जङ-इल भन्ने गर्थे, ‘जङ-चल उपयुक्त छैनन्, उनी केटीजस्ता छन्।’ कान्छा छोरा अर्थात् दोस्रा राजकुमार उनका लागि प्रिय छन्। जङ-अन धेरै किसिमले बुवाजस्तै छन्। उनको शारीरिक संरचना पनि बुवाको जस्तै छ। तर उनका बारेमा बाहिर धेरै कुरा बताइएको छैन।”
त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण भविष्यवाणी थियो। त्यति बेलासम्म बाहिरी संसारलाई त परै जाओस् किमका बारेमा उत्तर कोरियाली जनतालाई नै थाहा थिएन। उनको अधिकांश बाल्यकाल अझै रहस्यमै थियो। पत्रकार ब्र्याड्ली के मार्टिन पनि गो मीको यो कुरासँग सहमत छन्। उनले ‘अन्डर द लभिङ केअर अफ द फादर्ली लिडर’ शीर्षित किमवंशको इतिवृत्तान्त लेखेका छन्।
”किम जङ-नम डिज्नील्यान्डमा गएकै कारण अस्वीकृत भएका होइनन्,” उनले भने । ”किमपरिवारले छलकपट गर्न निकै जानेको छ। उनका बुवा किम जङ-इलले अपमानित अनुभव गरे होलान् जस्तो मलाई लाग्दैन। किम जङ-नमले नीति एवम् परिवर्तनका कुरा गरे होलान् र त्यो उनका बुवाले मन पराएनन् होला भन्ने मलाई लाग्छ।”
किम जङ-नम निर्वासनमा बेइजिङ पठाइए। उत्तराधिकारीको क्रममा त्यसपछि किम जङ-इलका माइला छोरा किम जङ-चल हुनुपर्थ्यो। तर उनीबारे कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक नसोचेजस्तो देखिन्छ। बरु उनले कान्छा छोरा किम जङ-उनलाई नै सबैभन्दा उपयुक्त पात्र देखे।
मार्टिनका अनुसार किम जङ-उनलाई उनका बुवाले उत्तराधिकारी छान्नुको कारण छोराहरूमध्ये उनी सबैभन्दा बढी निर्दयी र कठोर हुनु हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा उनमा उत्तराधिकारको कठोर सङ्घर्षबाट बँच्दै परिवारको बिँडो थाम्ने सम्भावना उच्च थियो। उनले आफ्नो निर्मम चरित्र देखाउन थालिसकेका थिए। गाेमीका अनुसार किम जङ-इलको निधनपछि किम जङ-उल सत्तामा आउँदा उनका सौतेनी दाइ हताश देखिन्थे।
”किम जङ-इलको निधन भएपछि किम जङ-नमले हठात् असुरक्षित भएको अनुभूति गर्न थाले। मैले अन्तिम पटक उनीसँग २०१२ को जनवरीमा सम्पर्क गरेको थिएँ। त्यतिखेर उनले मलाई ‘मेरो भाइ र किमवंशले मविरुद्ध केही खतरनाक काम गर्नेछन्’ भनेका थिए।” मार्टिनलाई किम जङ-उनले नै आफ्ना दाजुको हत्या गराएका हुन् भन्ने लाग्छ। उनको आफ्नै तर्क छ।”यो आफ्नै फुपाजु च्याङ सङ-थेइकको हत्यासँग पनि मेल खान्छ,” उनले भने । ”च्याङलाई सत्तापलटको योजना बनाएको आरोप लगाइएको थियो। हामी [पश्चिमी सञ्चारमाध्यम] ले त्यसलाई बेवास्ता गर्यौँ।
त्यसपछि किम जङ-उनले आफ्नै दाजुलाई तारो बनाए। हामीसँग त्यस्ता जानकारीहरू पनि छन् जसमा च्याङले चीन पुगेर भनेका थिए, ‘किम जङ-अनबाट मुक्ति पाऔँ र किम जङ-नमलाई भित्र्याऔँ।’ किमलाई ‘मेरै फुपाजु र दाजु चिनियाँहरूसँग मिलेर मविरुद्ध षड्यन्त्र गर्दैछन्’ भन्ने लाग्यो। यसले केही सङ्केत दिन्छ।” उनकी सानीआम्नको यो कथनले विश्वभर नयाँ तरंग ल्याइदिएको छ । बीबीसीबाट